Sergio Ramos oo aragtidiisa ka dhiibtay suurtagalnimad uu Eden Hazard ku imaan karo kooxda Real Madrid – Gool FM
Sergio Ramos oo aragtidiisa ka dhiibtay suurtagalnimad uu Eden Hazard ku imaan karo kooxda Real Madrid
(Madrid) 31 Maajo 2019. Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa muujiyay sida uu arko arinta ku aadan heshiiska la filayo in Eden Hazard uu ku imaan doono garoonka Santiago Bernabéu kaddib marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa shir jaraa’id ee rasmi ah uu kasoo muuqday shalay, wuxuu kaga hadlay wararka xanta ah ee dhawaanahan soo baxay ee sheegayay inuu ka tagayo Los Blancos xagaagan.
Kabtanka kooxda Real Madrid ayaana si rasmiga ah u sheegay inuu sii joogayo kooxda Real Madrid xili ciyaareedka soo aadan, inta uu ku gudi jiray shirka jaraa’id uu kaga soo muuqday caasimada Madrid ee dalka Spain.
Hadaba Sergio Ramos ayaa inta uu ku gudi jiray shirka jaraa’id waxaa la weydiiyay su’aal ahayd suurtagalnimad uu Eden Hazard ku imaan karo kooxda Real Madrid wuxuuna ku jawaabay:
“Eden Hazard waa ciyaaryahan weyn, wuxuuna dhiiragalin xoogan u noqon karaa Real Madrid, ma aqaano hadii uu imaan doono, ma garanayo sida ay xaaladu tahay, balse wuxuu wax badan ku kordhin karaa kooxdan”.
“Waxaan u maleynayaa inay jiri doonaan isbeddello badan ee kooxdda ah, ciyaartoy ayaa imaan doonta kuwo kalena wey baxayaan, waxaan u baahanahay gaajo iyo dhiirogelin”.
“Dadku waxay yiraahdaan: ku guuleysiga koobab waxay yareysaa rabitaanka si aad markale ugu guuleysan lahayd, haddii aan sameyno saxiixyo fiican, waxaan cusbooneysiin dooaa xamaasada iyo habdhaqanka wanaagsan ee kooxda, sidaasi darteed waxaan qabaa in mustaqbal wanaagsan aan halkan ku heysano, natiijooyinka iyo koobab waa arin muhiim ah waana taas waxa aan raadineyno”.
“Messi waa kan koowaad, sidoo kale waan jeclahay Maxamed Saalax” – Halyeey kooxda Real Madrid ah